Nhau - Foton Inoendesa 2,790 Units Nyowani Magetsi Mabhazi kuBeijing
Foton Inonunura 2,790 Units Nyowani Simba Mabhazi kuenda Beijing
Musi waKurume 25, mhemberero huru yakaitirwa pamuzinda weFoton muBeijing kuratidza kuunzwa kwemayuniti 2,790 emabhazi emagetsi matsva kumutengi wavo, Beijing Veruzhinji Vekutakura Boka. Nekuwedzera kweiyi yakawanda kwazvo yebhazi idzva reMotos, huwandu hwese hweMabhasi matsva emagetsi ari kushanda muBeijing ave kusvika zviuru gumi.
Pamhemberero yekuendesa, Kong Lei, Mutevedzeri weMutungamiriri weBeijing Ruzivo neEconomy Bureau, akataura kuti huwandu hwakakura hwemabhazi emagetsi matsva anozopinza simba nyowani mukuvandudza nekushandurwa kwenzira dzekutakura vanhu muBeijing.
Zhu Kai, General Manager weBeijing Veruzhinji Vekufambisa Boka, vanotaura zvikuru nezvekushandira pamwe kwekambani yavo neFoton, achiti mapato maviri aya acharamba achiwedzera kubatana kwavo kuti vadzikise mweya unobvisa kabhoni munzvimbo huru. Sekureva kwaZhu, Beijing Veruzhinji Vekutakura Boka vakatenga huwandu hwakazara hwe6,466 mayuniti eMabhoni AUV kubva muna2016 kusvika 2018 nemutengo wakakwana we10.1 bhiriyoni RMB.
Semumwe wevatambi vanotungamira muindasitiri nyowani yeChina emagetsi emabhazi, Foton yakave nekubudirira kunoshamisa maererano nehunyanzvi hwekugadzira uye kushambadzira kwemagetsi esimba mumakore gumi apfuura.
Nekuda kwekushanda kwayo nesimba, Foton yakatengesa 83,177 mayuniti mota uye yakatengesa 67,172 mota dzemotokari mumwedzi miviri yekutanga gore rino, kukwira ne17.02% uye 17.5% zvichiteerana.